🥇 ▷ Xiaomi Mi 9T Pro waa rasmi, kuwani waa astaamaheeda qiimahaan ✅
Xiaomi Mi 9T Pro waa rasmi, kuwani waa astaamaheeda qiimahaan
Hadal badan baa laga hadlay Xiaomi Mi 9T Pro xitaa kahor intaan la bilaabin si rasmi ah. Waana taas tusaalaha Xiaomi Redmi K20 Pro, oo la soo bandhigay dhammaadka May, waa isla noocii loogu talagalay suuqyada bari, gaar ahaan Hindiya. Markaa astaamaha iyo hadiyadaha cusub My 9T Pro Horey ayey u duubeen filim ku filan oo lagu yaqaanno… Waxaan dib u eegi doonnaa muuqaalka kore ee sumcaddan oo shaki la’aan ku timid inay arrimaha ku adkeynayso wax ka badan noocyadooda ugu sarreeya.
Tilmaamaha Xiaomi Mi 9T Pro
Aynu aragno Tilmaamaha Xiaomi Mi 9T Pro:
Shaashadu waa mid ka mid ah awoodaha ugu weyn ee My 9T Pro. Telefoonku waa dhab “dhammaan shaashad”. Nidaam ah kamarad horusocod ah laga bilaabo geeska kore, kaas oo u oggolaanaya gole bilaash ka ah digniino ama dillaaca natiijada natiijada a saamiga shaashadda-ilaa-jirka ee ku dhawaad ​​92%… Qiimo qaali ah. Goluhu wuxuu leeyahay a Jaantusyo 6.39-inji leh cabbir buuxa HD +, teknolojiyada HDR iyo Had iyo jeer-On. Waxyaabaha kale ee shaashadda ka muuqda waa iftiinka 600 nits iyo a cufnaanta pixel ka weyn 400 PPI. Shaashadan ayaa soo galaysa 19.5: 9 Qaab waxaana lagu ilaaliyaa galaaska GorillaGlass 5. Mobilku wuxuu leeyahay naqshad aad u fiican iyo kulan aan la qiyaasi karin, oo ay ku jiraan agabka ugu tayada wanaagsan. Dhanka astaanta, waxay cabbirtaa 8.8 mm waxayna kujirtaa Kaarboon Black, Flame Red iyo Glacier Blue.
Xiaomi Mi 9T Pro wuxuu la imanayaa shaashad buuxda marka la isku darayo kamarad hore loo soo qaaday
The Xiaomi Mi 9T Pro processor Waa wax qabad sarreeya. Waxaan haysannaa chipset-ka Snapdragon 855 at 2.84 GHz leh a Adreno 640 GPU oo ay weheliso xusuus 6GB Ram iyo 64GB oo ah kaydinta UFS 2.1. Isku-darkaani wuxuu u oggolaanayaa dhibco aan ka yarayn 373,000 oo ku yaal AnTuTu… ugu yaraan waa nooca bari K20 Pro, taas oo sida aan ognahay ay la mid tahay My 9T Pro. Nidaamka hawlgalka ee la socda qalabkan awoodda badan ayaa ah kan hadda socda Android 9.0 oo hoos imanaya MIUI 10 interface interface.
The baytarigu wuxuu leeyahay awood ku filan oo 4000mAh ah waana mid la jaan qaadaya 27W dhakhso.
Waxaan haysannaa 48MP + 13MP + 8MP kamarad saddexagal ah, kaas oo leh awood lagu kalsoonaan karo oo lagu duubo fiidiyowyada 4K at 60fps. The camera for selfies waa 20 MP oo uu leeyahay aalad gadaal u noqon karta oo ka soo baxda geeska kore ee qalabka.
Waxaan leenahay heer gudbinta xogta Labaal 4G LTE oo xawaare ku leh Gigabit, wifi 5, Bluetooth 5 iyo GPS. Ku xirnaanta jirka waa casriga USB Type-C deked, hayn 3.5mm jaakada maqalka iyo Dual SIM booska. Dabcan way jiraan NFC Mobilkaan loogu talagalay Yurub, iyo qalabka faraha waxaa lagu dhejiyaa shaashadda. Codka waxaan haysanaa howsha processor-ka Audio PA madaxbannaan, Dual Istaadiye iyo Hi-Res Audio.
Xiaomi Mi 9T Pro wuxuu keenayaa SD 855 iyo ilaa 128 GB oo ROM ah
Qiimaha Xiaomi Mi 9T Pro
Qiimaha Xiaomi Mi 9T Pro nooca 6GB ee RAM + 64GB ee ROM waxay noqon doontaa 399 euro, halka nooca 6GB ah ee RAM + 128GB ROM ay ku kici doonto 449 euro.
Gunaanadka iyo fikradaha ku saabsan Xiaomi Mi 9T Pro
Cusub Xiaomi Mi 9T Pro Waa astaan-qaadis oo la timid wax walba si ay u noqdaan astaan ​​Android ah. Qiimaha – saamiga qalabka ayaan loo dulqaadan karin moobaylka heerkiisa, tanina lama iloobi karo marka aad dooraneyso taleefanka gacanta ee SD 855.
Bogga rasmiga ah ee Xiaomi gudaha Spain.
Soo galitaanka ‘Xiaomi Mi 9T Pro’ waa mid rasmi ah, kuwani waa astaamaheeda qiimahaan markii ugu horreysay waxaa lagu daabacay Planet Red.